ओछ्या/नमा सु/तेकै अव/स्थामा मान/सिक रोगी यी मजदुर/काे दा/उ प्र-हा-र/बाट ग/यो ज्या/न! – Taja Khawar
ओछ्या/नमा सु/तेकै अव/स्थामा मान/सिक रोगी यी मजदुर/काे दा/उ प्र-हा-र/बाट ग/यो ज्या/न!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ०७, २०७८ समय: १९:१०:१५
ओछ्यानमा सुतेकै अवस्थामा मानसिक रोगी यी मजदुरकाे दाउ प्रहारबाट गयो ज्यान!
adminMay 21, 2021 समाचार, समाज0
मोरङको सुन्दरहरैँचामा सुतेकै ठाउँमा घाँटी काटेर हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । घरमा एक्लै बस्दै आएका सुन्दरहरैँचा–३ लोचनीका ४० वर्षीय विष्णु ऋषिदेवको हत्या आरोपमा प्रहरीले स्थानीय २३ वर्षीय पुजन राईलाई पक्राउ गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट र इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा जयबहादुर राईको छोरा पुजनले फलामको बामफोक (दाउ) ले घाँटीमा प्रहार गरी मारेको खुलेको मोरङ प्रहरी प्रवक्ता मानबहादुर राईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मानसिक रोगीसमेत रहेका पुजनलाई आज बिहान ८ः०० बजे प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । साथै उक्त घटनामा प्रयोग भएको दाउ पुजनको घरको भान्साकोठामा रहेको चाङ माथिबाट बरामद गरिएको छ । पक्राउ परेका उनीमाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को ज्यानसम्बन्धी कसुरमा ईलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीबाट थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको डिएसपी राईले जानकारी दिए ।
धारिलो हतियारले अघिल्लोपटिको घाँटी काटिएको अवस्थामा मजदूरी काम गर्दै आएका ऋषिदेवको शव फेला परेको थियो । गछिया खोला छेउको ऐलानी जग्गामा टिनको छानो भएको र टाटीको बेरा लगाएर बनाइएको झुप्रो घरमा एक्लै बस्दै आएका ऋषिदेव बिहीबार बेलुका ८ बजेतिर आफ्ना भाइ अपोलो ऋषिदेवको घरमा खाना खाई घर आएर सुतेका थिए ।
पत्निको मृत्यु भइसकेको र छोराछोरी पनि घरभन्दा बाहिर नै बस्ने गरेका कारण विष्णु एक्लै बस्थे । सधैँ खाना भने आफ्ना भाइको घरमा खान्थे र सुत्नका लागि घर नै फर्किन्थे । बिहान ६ बजेतिर सँगै मजदूरी गर्ने साथी राजकुमार चौधरीले बोलाउन जाँदा नबोलेपछि भित्र गएर हेर्दा विभत्स अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो । त्यसपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
Last Updated on: May 21st, 2021 at 7:10 pm